Xog: Maxaad ka ogtahay Qarixii ka dhacay Maanta Wadada Shaqaalaha,? – Hornafrik Media Network
Xog: Maxaad ka ogtahay Qarixii ka dhacay Maanta Wadada Shaqaalaha,?
faah faahin ayaa ka soo baxaya Qarax Gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Wadada Maka Al-Mukarama. gaar ahaan Banaanka hore ee Midnimo Supermarket. Waxaana Qaraxa uu ka dhacay halkaasi xilli ay ahayd Wadada Mashquul.
inta la ogyahay Qaraxan waxaa ku dhintay 6 Qof, 4 kalana way ku dhaawacmeen, kuwaasoo isugu jiray dad meesha joogay iyo kuwa saarnaa Gaadiidka Dadwaynaha, Waxaa sidoo kale ku burburay Gaadiid wadada marayay iyo Carwooyin iyo Dukaamo ka ag dhawaa Goobta.
Gaariga Qaraxa loo adeegsaday ayaa ah Nooca Baabuurta Raaxadda ah, Waxayna Muuqaal ay aragtay Hornafrik uu ay duubeen Kaamirooyinka CCTV ka hor inta uusan Gaarigu qarxin ay muujinayaan in Gaariga markii uu qarxiyay uu doonayay inuu dhaafo Gaari kale,isagoo ku socday dhexda Wadada halkaasi oo baabuurta wax baasaysa ay ku dhaafaan kuwa tooska u socda.
Baabuur Ciidan oo ay leeyihiin Illaaladda Safaaradda Imaaraadka ayaa marayay goobta, kuwaaso ayaa markiiba qoryo ku qabtay Gaariga, taasoo ay ula jeedeen ha noo soo dhawaanin. Waana Qaab ay sameeyeen Baabuurta Ciidanka inay iska fogeeyaan Baabuurta yar yar, balse Ismiidaamiyaha oo u muuqday qof qalqalay ayaa u qaatay in la ogaaday, kadibna waxa uu isku qarxiyay halkii uu marayay, isagoo aan gaarin Bartilmaameedkiisii.
Qaraxa kadib waxay Ciidamadda Illaaladda u ahaa Safaaradda Imaaraadka dhinac kasta u fureen Rasaas, iyagoona laftigoodu ka qalqalay Qaraxa. Waxaana la rumaysan yahay in dhaawacyadda qaarkood ay sababeen rasaasta ay ridayeen.
Illaalada Imaaraadka oo ka dagay Gaadiidka Qaraxa kadib
Hornafrik waxay la wadaageen Saraakiil Sirdoon Xogta rasmiga ah ee halka uu Gaarigaasi ku jeeday, Waxaanse go’aansanay inaanan soo bandhigin sababo la xiriira annagoo illaalinayna Ganacsiga Hoteelka ay doonayeen inay beegsadeen.
Qaraxan saaka ka dhacay Muqdisho ayaa ku soo aadaya, saacado kaddib markii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu sheegay in Ciidamada Xasilinta ay suura geliyeen in ammaanka Muqdisho uu soo hagaago, isla markaana aanay magaalada muddo bil ah qarax ka dhicin.